Omeo ny GIMP ny fijerin'ny Photoshop | Avy amin'ny Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | fampiharana, Tutorials / Manuals / Tips
Fotoana lasa izay dia nasehoko anao ny fomba omeo ny GIMP ny fijerin'ny Photoshop CS6, na izany aza, ny fatiantoka ananan'ity fomba ity dia ny nanomezany antsika ny GIMP miloko mainty. Ity karazana fanitsiana na tweaks, izy ireo dia mety hanampy amin'ny fifindra-monina sy ny fanamboarana ny mpampiasa Photoshop amin'ny fitaovana Open Source.
amin'ny alalan'ny Webupd8 Hitako ny fomba iray hafa anaovana azy, amin'ity indray mitoraka ity, miaraka amin'ny loko maivana; Ary tsy izany ihany, fa ankehitriny isika dia afaka mampiasa ny hitsin-dàlana fitendry toy ny amin'ny Photoshop ary apetraka amin'ny fomba mitovy amin'ilay fitaovana Adobe ny takelaka. Ity ny vokatra ao amin'ny KDE-ko:
El Hack dia avy amin'ny tanan'i +Martin Owens ary mora be ny mampihatra azy satria ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia manolo ny fampirimana GIMP amin'ny fisie vaovao.
Amin'ny fampiharana an'ity hack ity dia ho very ny safidintsika sy ny fikirakirana nofaritantsika tao amin'ny GIMP
1 Omeo ny GIMP ny fijerin'ny Photoshop
2 Avereno ireo fanovana
Ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia ny miditra amin'ny pejin'ny Martin Owens ao amin'ny Deviantart ary ampidino ity rakitra manaraka ity (izay avelako ao amin'ny rohy mivantana).
Sintomy ny Photoshop Tweaks ho an'ny GIMP
Vantany vao alaina dia miroso amin'ny famerenana ny fampirimana GIMP ao amin'ny / tranonay.
Ireto setting ireto dia noforonina ho an'ny GIMP 2.8, ka raha mampiasa GIMP 2.9 (na kinovanao amin'ny fampandrosoana) ianao dia tsy mandeha daholo ny zava-drehetra. Ohatra, mety tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny hitsin-dàlana fitendry ary misy olana kely amin'ireo sary masina.
Na izany na tsy izany, raha te hanao azy amin'ny kinova avo kokoa noho ny 2.8 isika, ny tokony hataontsika dia:
Izao dia esorinay ao an-tranonay ny fisintomana, satria misy folder antsoina hoe: .gimp-2.8 ary izany no izy.
Raha mampiasa kinova GIMP avo kokoa isika dia tsy maintsy mandika ny folder .gimp-2.8 mankany ~ / .config / GIMP / ary hamerina ny anarana hoe 2.9, izany hoe:
Tena mahavariana ny valiny.
Avereno ireo fanovana
Raha hiverenana dia tsy maintsy averina fotsiny ireo lahatahiry izay notohananay:
rm -r ~ / .gimp-2.8 mv ~ / .gimp-2.8-taona ~ / .gimp-2.8
Ho an'ny GIMP 2.9+:
rm -r ~ / .config / GIMP / 2.9 mv ~ / .config / GIMP / 2.9-taona ~ / .config / GIMP / 2.9
Ary dia izay. Aza adino fa ny lalana hitsin-dàlan'ny fitendry dia mety miova ary koa ny safidy sasany ary ny hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Omeo ny GIMP ny fijerin'ny Photoshop
Ny tena marina dia tena ilaina tokoa ny manao azy amin'ny solosain'olona tsy zatra fampiharana multi-windows. Mitaraina mafy momba izany izy ireo ao amin'ny GIMP.
Ny GIMP dia novaina ho Window Single miaraka amina safidy menio tsotsotra hatramin'ny kinova 2.8
Tsy momba ny Windows Single ihany, fa momba ny sary masina sy ny fomba fandaminana ireo takelaka.
Eny, azoko tsara izany avy amin'ny lahatsoranao elav, fa valiako satria, ny famakiana izay lazain'i Jorge-1987 dia notononiko: «Ny tena marina dia tena ilaina tokoa ny manao azy amin'ny ekipan'ny olona izay tsy zatra amin'ny fampiharana varavarankely. . Mitaraina be momba izany izy ireo ao amin'ny GIMP. ”Ary, araka ny fahazoako azy, milaza izy fa ny mampihemotra azy ireo dia ny maodely misy varavarankely marobe; tsy ny maha samy hafa ny sary masina na ny fandaminana ny takelaka. Tsy haiko raha manazava ny tenako aho. Ny valiny fotsiny no navalin'ilay mpampiasa azy.
Ah eny eny .. azoko ilay 😛
Amin'izay ianao dia mihinana toerana amin'ny lafiny roa amin'ny efijery, mamela lavaka foana eo ambany ... raha tsy hoe manana efijery 28-inch ianao dia heveriko fa tsy dia ilaina loatra.
Miezaha esory ny dinika loko avy amin'ny boaty (ireo boaty roa misy ny loko lehibe sy faharoa) amin'ity fomba ity dia azonao atao ny mampihena ny boaty ho an'ny kisarisary kely (kely) ary amin'ny Windows, entinao ankavanana ny fifanakalozan-kevitra amin'ny loko tsanganana miaraka amin'ny sosona sns.
Amin'ny fanaovana izany dia mamonjy habaka betsaka amin'ny monitor 21-inch mahazatra ianao.
Ohatra amin'ny fomba ananako: https://farm8.staticflickr.com/7364/16217560217_76e24b0546_c.jpg
Lahatsoratra tena tsara 😉
Amin'ny lafiny Elav, tsy fantatro raha ho ahy irery izy io, saingy hitako ny zava-misy fa ny fanindriana ireo sary dia tsy mampiova ny habeny ary noho izany ny tsipiriany dia tsy ankasitrahana, tokony hanao zavatra momba izany izy ireo.
Ny sary ao amin'ilay lahatsoratra ve no tianao holazaina?
Eny raha izany dia efa novaiko ny habeny 😉
Eny, mitovy ireo ... Ankehitriny dia ankasitrahana kokoa ny pitsopitsony. Tena tsara !!
Ny lahatsoratra amin'ny takelaka havia, eo ambanin'ny mpaka loko, tsy azo esorina, sa tsy izany? Heveriko fa nesorinao tamin'ny sary nalaina tamin'ny alàlan'ny fanovana azy ireo ianao, satria misy dian-kapoka kely amin'ny feo volondavenona maivana kokoa.
Joksan dia hoy izy:
apetraho ao amin'ny browser-nao ny fanitarana zoom hover, hamonjy anao na dia tsindry iray aza, mety amin'ny tranokala maro io.
Valiny tamin'i Joksan
Avelako ho anao ny andiana fonosana lohahevitra kisary ho an'ny Gimp izay nangoniko taloha kelin'izay:
Ary izaho manokana, raha tokony hampiasa sary masina Photoshop, dia sary masina Symbolic no ampiasaiko. Tsara kokoa izy ireo, homogeneous kokoa ary fotoana vitsy lasa izay dia nanomana sy namolavola fonosana roa aho, ny iray ho an'ny lohahevitra birao maivana ary ny iray ho an'ny lohahevitra maizina:
Misaotra Jesosyda !!! ary Misaotra an'i Desdelinux tamin'ny zavatra rehetra azonao atao. Loharano misokatra na aiza na aiza fiarahamonina !!! 🙂
Manana GIMP 2.8.10 aho ary tsy mandeha amiko.
Fafao ny ~ / .gimp-2.8
Ary esory ny folder .gimp-2.8 avy amin'ny ZIP ao ~ /
Ary tsy nety tamiko izany, na dia nofafako ny fanaingoana izay nananako aza. Inona no tsy mety ataoko?
PS: Ao amin'ny Ubuntu 14.10 aho
Tsy mila mamafa ny folder .gimp-2.8 ianao fa tsy mila mandika ireo lohahevitra ao anaty .gimp-2.8 / lohahevitra / fampirimana
Pej: ny lohahevitra an'ohatra dia tsy maintsy ao:
.gimp-2.8 / lohahevitra / tandindona-gimp
raha mamafa ny .gimp-2.8 iray manontolo ianao, dia ho very daholo ny setting Gimp anao.
Malagueños tany am-boalohany sy maimaim-poana dia hoy izy:
Toy izao ny fandikana ny atin'ny fampirimana lohahevitra amin'ny /usr/share/gimp/2.0/themes/photoshopware
Mamaly an'i Malagueños tany am-boalohany sy afaka
Mamiratra mamiratra. Amin'ny maha-CGArtist ahy dia tsy manao na inona na inona aho fa maniry ny fifindra-monina (araka izay tratra), hanafaka rindrambaiko, saingy lasa sarotra be ilay fiovana rehefa miova ny lamina sy ny zava-drehetra. Tiako i Krita noho izany indrindra.
Toy izany koa, toy ny amin'ny Photoshop ... Manontany tena aho momba ny tena fampiasana ireo fitaovana ireo ankoatry ny hadisoana retouching (satria efa manana Lightroom na Darktable hanaovana retouching isika). Ho an'ny zavatra ataoko indraindray (lamba 2D) dia aleoko Krita.
Diego redero dia hoy izy:
Izaho manokana dia tsy tiako ny rafitra na programa toa ny hafa.
Valiny tamin'i Diego Redero
Misaotra betsaka, efa ela no nampiasako ny Gimp, nefa tsy nahay manam-pahaizana manokana tamin'ny fampiasana azy, saingy vitako ny nampiditra azy tao amin'ireo sanganasa kely nataoko, sary izao, azoko atao izao ny mamindra ny mpiara-miasa amiko handray fanapahan-kevitra hanomboka hampiasa azy io. Cheers Buddy!
Tiako izany, efa nampiasaiko io toerana io nandritra ny fotoana ela aho, na dia misy antony aza mampitombo be ny fotoana ilàny hanidiana ny GIMP, indraindray aza misy hafatra toa milaza fa tsy mamaly ilay programa ary segondra vitsy taty aoriana dia farany manidy.
Tsy haiko raha sendra ahy io.
JaviMG dia hoy izy:
Salama Jesosy, tsy mankasitraka fiovana aho rehefa manomboka ny Gimp, ny mifanohitra amin'izay amiko, mitovy amiko ihany no mahazo ahy, manidy ny fotoam-pivoriana raha toa miseho vetivety ny varavarankely fampitandremana izay tsy mamaly mangataka ny fanidiana fa manidy tena nefa tsy mila miditra an-tsehatra. toy ny mahazatra.
Mahagaga fa amin'ny solosaina findaiko taloha ihany no anaovana izany, fa tsy amin'ny solosaina birao misy ahy ankehitriny, noho izany dia mety noho ny tsy fahampian'ny enti-manana ... mitandrema! Tsy fantatro izay fitaovana anananao, milaza izany fotsiny aho raha mifototra amin'ny zavatra niainako aorian'ny fitsapana ny mod amin'ireo solosainako roa.
Misy hevitra avy amin'ny olona mandroso kokoa ve?
Mamaly an'i JaviMG
Izany dia nanjo ahy tamin'ny Athlon II X2 taloha tahaka ny ankehitriny, miaraka amin'ny FX 6300 ankehitriny, ny zavatra hafahafa dia ny vao nanomboka ny GIMP aho, nikatona ara-dalàna tamin'ny solosaina roa, nanomboka tamin'ny fanombohana faharoa dia mila fotoana hanidiana.
Tena tsara, tena ilaina amin'ny toerana iasako, misaotra betsaka.
Lapan'i Isaac dia hoy izy:
Io wapo io, tsy hoe tsy tiako ny famolavolana GIMP, fa tsy tiako fa hisy tabilao 20 tsy miankina
Valiny tamin'i Isaac Palacio
Ny zavatra ratsy momba ny Gimp, misy extension extension XCF, ... ary tsy mamela ny fanovana ho JPG, izay maivana kokoa.
Avy amin'ny mpampiasa Debian sy ArchLinux teo aloha, niarahaba anao… FreeBSD Unix.
Ny endrika naterak'i GIMP dia XCF, izay ahafahanao mitahiry ny toetra mampiavaka ny fisieo toa ny sosona, ny lalana, sns ...
Amin'ny alàlan'ny safidy fanondranana sy fanafarana dia azonao atao ny manova sy mamonjy JPG, PNG na GIF amin'ireo endrika maro.
Raha ny marina, amin'ny fampiasana sosona dia mora be ny manao GIF mihetsika na mamorona PDF
Amin'izao fotoana izao dia heveriko fa tokony hanara-maso an'i KRITA ianao. Tsy fantatro ny antony hitako fa tsara lavitra noho ny gimp amin'ny lafiny rehetra.
Afaka manomboka eto ianao
ary tohizo izao
mandehana ny comepam eto dia tigra
Weezard dia hoy izy:
Ity tranokala ity sy ny tetika geek. Tiako ny Gimp ary miaraka amin'ilay fijerin'ny varavarankely mitambatra dia tsy mila izany aho mba hitovy amin'ny olon-kafa.
Valiny tamin'i Weezard
ary ho an'ny kinova amin'ny windows dia mandeha ihany koa izy?
Eny, mandeha ihany koa.
Tsara ity mod ity ... manome endrika mahafinaritra kokoa an'i Gimp izy.
Ny fampifantohana ireo dock toa ity raha ny hevitro dia tena azo ampiharina, hitako fa mitovy be amin'ilay maodely »tokana fitaratra» fa misy fanovana kely ... ny kisary «dock» «dock» amin'ny grayscale dia manome azy endrika kanto, (miaraka ny fahazoan-dàlana avy aminao Jesosy dia hanandrana ny Dpixel ho an'ny biraovana ihany koa aho, amin'ny fahitako ny bilaoginao tena mahaliana ary nampidiriko tao amin'ireo tiako indrindra), indrisy fa etsy andaniny sy amin'ny menus no ahitantsika ireo sary masina mahazatra izay mivoaka. mifanaraka amin'ireo sary masina vaovao omen'ity mod ity, etsy ankilany, manana ny fitaovana sy ny safidy borosy ao anaty kiheba eo amin'ny dock layer, ary koa ny tantaran'ny sary sy sary misokatra eo ambany, dia toa tena nahomby sy nahazo aina.
Na izany na tsy izany, ny mpankafy ny varavarankely misaraka dia manana safidy tsy hanara-maso foana ny maody "tokana fitaratra" ao amin'ny menio "windows" hanohizany hiasa sahala amin'ny Gimp tany am-boalohany.
Notsapaiko tamin'ny mini 10 ″ Hp aho ary nanjavona ny tapany ambany ka mbola azoko atao ny manohy miasa amin'ny varavarankely mitokana dia ankasitrahana, mifanohitra amin'izay amin'ny solosaiko birao izay ahitako monitor 17 This Ity " photoshopping "mody tokana am-baravarankely toa tsara: S ... hehehe, tsara sy mifanaraka amin'ny fanehoan-kevitra no mety amin'ny efijery panoramika.
Hijery an'i Krita aho izay toa tena tsara tarehy na dia eo aza ny KDE, apetraka amin'ny Xubuntu tsy haiko ... fa ny tena izy dia nijery ny tranokalany aho ary tsy mino aho afaka manohitra ... Ny tranomboky KDE dia manampy rindranasa sy fonosana hafa izay tsy tadiaviko ary manakana ahy tsy hanadinika rindranasa amin'ity tontolo ity.
Manantena aho fa hanampy olona amin'ity karazana famerenana ity izay andraisako anjara amin'ny fikasana hanao ny bitako araka izay avelan'ny fahalalako mamela ahy.
Misaotra an'i DesdeLinux tamin'ity fidirana ity ary misaotra an'izay rehetra maneho hevitra mahatonga ahy hianatra bebe kokoa isan'andro, mamoaka fehin-kevitra etsy sy eroa…. 🙂